गायक किरण प्रधान : के सोचें मैले,के भयो अहिले - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ मंसिर २०७४, शनिबार ०५:४८ |
किरण प्रधानले गीत गाउनकैलागि दार्जिलिङदेखि काठमाडौंसम्मको दुरी छिचोले । डा बनाउने बाबुको सपनालाई लत्याएर गीत गाउदै हिडिदिएकोमा उनले थुप्रैपटक गाली पनि खानुपर्यो । तर संगीतप्रतिको अद्भूत जुनुन र उनीभित्र निहीत प्रतिभाले उनले तत्कालीन समयका संगीतका महारथीहरु नातिकाजी र गोपाल योञ्जनसम्मलाई रिझाए । आफ्नो स्वरको जादूले लाखौं श्रोता दर्शकलाई आफ्नो प्रशंसक बनाए ।
तर त्यतिबेलै उनी यस्तरी अलप भैदिए,त्यसपछि नेपाली संगीत क्षेत्रमा उनी नोटिस हुने गरि कहिल्यै झुल्किएनन् । त्यसो त उनी देशको राजधानी काठमाडौंकै बासिन्दा बनेका छन् तर सयौं संख्यामा रहेका रेकर्डिङ स्टुडियोहरु उनकालागि टाढा लाग्दै गयो । गाउन भनेपछि महिहत्ते गर्ने किरणलाई पनि कहिले काहीं लाग्छ– के सोचें मैले के भयो अहिले ।
हुन त किरण विशुद्ध गायक हुन् । किनभने उनी श्रोता र दर्शकको मनछुने गीत गाउछन् । उनका पारखी श्रोता दर्शकहरु भन्छन्–किरणको स्वरमै जादू छ । शिक्षा क्षेत्रकालागि उनी आदरणीय किरण सर हुन् भने चलचित्र क्षेत्रमा नेपालमा पहिलो पटक भिडियो चलचित्र बनाउने उनी नै थिए ।
भूल हो तेरो,माया प्रीतिको चोखो कथा,के सोचे मैले के भयो अहिले..यी गीतहरु नेपाली गीत संगीत क्षेत्रका मखमली गीतहरु हुन् । र,यी गीतहरुका गायक उनै किरण हुन् ।
बुबा जगतनारायण प्रधान तथा आमा लक्ष्मी प्रधानका सुपत्र किरण प्रधानको जन्म विक्रम सम्वत २०१० साल श्रावन २८ गते दार्जिलिङमा भएको हो । सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका उनको अधिकांश बाल्यकाल मामाघरमा नै बित्यो । यसैपनि मामाघर भन्नासाथ मायाको खानी त्यसमाथि झन उनका त ६,६ जना मामाहरु । मामाहरुको माया नै मायामा हुर्किएर होला उनी बाल्यकालमा साह्रै बदमास र छुकछुके स्वभावका थिए । बालसुलभ बदमासी गर्दै हुर्किएको आफ्नो बालापनलाई अहिले पनि खूब मिस हुने उनी बताउछन् ।
बाल्यकाल भनेकै यस्तै त हो,खेल सँगसँगै बिभिन्न बदमासी । तर स्वभावले जतिसुकै बदमास भएपनि पढाइमा भने किरण राम्रै विद्यार्थी थिए । उनका बुबा जगतनारायण शिक्षक थिए । बुबाको सपना छोरालाई डाक्टर बनाउने थियो । तर आफू ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो बुबाको सपना छोरालाई डाक्टर बनाउने, यता छोराको रुची भने गीतसंगीततर्फ । सानै उमेरदेखि कतै गीत संगीत सुनियो कि खुट्टा हल्लाईहाल्ने स्वभावका थिए किरण ।
सानै उमेरदेखि गीतसंगीत मनपराउने उनी अलि ठूलो भएपछि तारादेवी,प्रेमध्वज प्रधान,बच्चुकैलाशका गीतहरु सुन्नुको साथै स्कूलमा साथीहरुको माझ टेबुल ठट्टाएर खूबै गाउथे । उनको गीत सुनेर मख्ख हुने साथीभाइहरुले तिम्रो स्वर धेरै राम्रो छ नेपाल गएर रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर खूब हौस्याउथे । नभन्दै अजींगरको आहारा दैवले पुर्याइदिन्छ भने जस्तै उनको बुबाको जागीर काठमाडौंमा सरुवा भयो । त्यसपछि बुवासँगै किरण पनि नेपाल अर्थात काठमाण्डौ आए ।
बुबाको डाक्टर बनाउने सपना बोकेरै काठमाण्डौ आएका प्रधानपरिवारमा भित्र भित्रै गीतसंगीतको तरंग फैलदै गएको किरणका बुबा जगतनारायणलाई भने पटक्कै मनपरेको थिएन । तर लुकिछीपी नै भए पनि किरण गीतसंगीत तर्फ अझ ढल्कदै गए । कतै गीतसंगीतको कार्यक्रम हुने सुईको पाउने वित्तिकै हेर्न वा सके भाग लिन दौडिहाल्थे । यस्तैमा एकदिन काठमाण्डौमा गायन प्रतियोगिता हुदैछ भन्ने थाहा पाएपछि घरमा भन्दै नभनि उनले सुटुक्क भाग लिएर प्रथम हुन सफल भए ।
यसरी घरमा आमा बुबालाई भन्दै नभनि भाग लिएको प्रतियोगितामा प्रथम भई उनले ट्रफीसँगै ७०० रुपयाँ समेत जिते । आफूले पाएको विजयको खु्शीको खबर घरमा गएर बुबालाई सुनाउन त सुनाए उनले । तर बुबाले स्यावासी दिनु त कता हो कता उल्टै गाली गरे । भोलिपल्ट बुबाले नै गाउभरि मेरो छोराले पुरस्कार जितेर आयो भनेर सुनाउँदै हिडेपछि त किरणलाई के चाहियो ? गीत गाउन उनलाई थप हौसला मिल्यो । यसरी स्कुलको टेबुल ठट्टाएर गाउन शुरु गरेका उनको गायन यात्रा अन्तत रेडियो नेपालसम्म पुगेरै छाड्यो,जुन हरेक गायक गायिकाको गन्तव्य थियो ।
त्यतिबेलाका उनका साथी राजु तुलाधर अनि अनिल प्रधानको सल्लाहमा रेडियो नेपाल पुगेका उनले पहिलो पटक नै वरिष्ठ संगीतकार नातिकाजीको सामुन्ने गीत गाउनु परेको थियो । त्यसलाई उनी अविस्मरणीय पलका रुपमा अझै समझन्छन् । बिक्रम सम्बत २०२७ भदौमा रेडियो नेपालमा भ्वाईस टेष्टको लागि उनले आफनै गीत मलाई त मेरो डम्फुको ताल मनपर्छ गाएका थिए । पछि नातिकाजीले अर्काे गीत गाउन आग्रह गरेपछि उनले तारादेवीको कालिपारि दाइ कति राम्रो गीत गाए । उनले गीतको पहिलो अन्तरा मात्र के गाएका थिए बाहिरबाट नातिकाजीले भयो भयो भन्दै हात उठाएर रोकिदिए ।
यसरी नातिकाजीले गीत गाउदा गाउदै बीचैमा रोकिदिएपछि आफनो स्वर राम्रो नभएकोले गीत रोकिदिएको भन्ने उनलाई लाग्यो र मनमा चिसो पनि पस्यो । उनी सम्झन्छन्–’गाउँदा गाउँदै नातिदाइले त्यसरी बीचमै रोकिदिएपछि म त होपलेश भैहालें । ल आज त विग्रिहाल्यो भन्ने चिन्ता त थियो नै,त्यसमाथि नाति दाइले के भन्ने हुन् भन्ने डर पनि थियो मनमा । त्यसैले म डराइ डराइ स्टुडियोबाहिर निस्किएँ । नाति दाइको गाली खाने निश्चित थियो मनभित्र । तर जब म बाहिर निस्किएँ, नाति दाइले आएर अँगालो हाल्नु भयो र निकै राम्रो गाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले त्यतिबेलै म भ्वाईस टेस्टमा पास भएको जानकारी समेत दिनुभयो । उहाँको कुरा सुनेर मलाई त संसार नै जिते जस्तो लाग्यो ।’
भ्वाईस टेस्ट सजिलै पास भएपनि गीत रेकर्ड गराउन भने उनले ७ महिना कुर्नुपर्यो । सपना देख्नुपर्छ एकदिन अवश्य पूरा हुन्छ । किरण प्रधानले दार्जिलिङमा छँदा नै देखेको रेडियो नेपाल गएर गीत रेकर्ड गराउने सपना विक्रम सम्वत् २०२७ सालमा पूरा भयो । पहिलो पटक नै किरणले आफनै शब्द र संगीतमा मलाई त मेरो डम्फुको ताल मनपर्छ बोलको गीत रेकर्ड गराए । त्यसबापत उनले पारिश्रमिक स्वरुप ३५ रुपैया पाए । त्यो उनको जीवनकै पहिलो पारिश्रमिक थियो ।
यसरी गीत गाउदै जाने क्रममा उनको स्वरको माधुरी उडेर गोपाल योन्जनसम्म पुग्यो । एकदिन गोपाल योन्जन आफैंले उनलाई भेट्न बोलाए । किरण पनि गोपाल योन्जनलाई भेट्न साहै आतुर थिए । जब उनले गोपाल योन्जनलाई भेटे,सानो औपचारिक कुराकानी पश्चात उनलाई गीत गाउन आग्रह गरे गोपालले । त्यति महान् हस्तीको अगाडी गीत गाउदा डरले हातखुट्टा लगलग काम्यो उनको । तर पनि उनले जसोतसो गीत गाएर सुनाए । किरणको गीत सुनेपछि उनलाई एउटा गीत गाउन लगाउने निधो गरेर आफनो डायरी किरण सामु राख्दै गोपालले ल एउटा गीत छान भने । किरणले डायरी पल्टाउदै गए । उनले सुरुमा मायालु हजार हुन्छन् बोलको गीत छाने । तर उक्त गीत पहिले नै ध्रुब केसीले गाईसकेका रहेछन् । किरणले फेरी पान्ना पल्टाउदै गए । उनी एउटा पान्नामा पुगेर टक्क अडिए । गीतको सुरुको लाईनले नै उनको नजरलाई चुम्बकले झै तान्यो । यसो पढे,त्यो लाईन उनलाई खुबै मनपरयो तर मनमा शंका लाग्यो । यो गीत पनि कसैले गाईसकेको त छैन ? उनले झट्ट गोपाल योञ्जनलाई सोधिहाले । योञ्जनले त्यो गीत कसैले नगाको जबाफ दिएपछि उनले त्यही गीत गाउले निधो गरे । गोपाल योञ्जनको गीत गाउन कहाँ सजिलो थियो र ? करिब १ महिनाको निरन्तर अभ्यासपछि बल्ल उक्त गीत रेकर्ड भयो । त्यही गीत किरण प्रधानको टर्निङ्ख प्वाइन्ट बन्यो । त्यो गीत थियो भूल हो तेरो…..।
यसरी आधुनिक गीतहरुमा राम्रो पकड जमाउदै एकपछि अर्काे हिट गीत दिइरहेको अवस्थामा किरण प्रधानलाई अर्काे उचाईमा पुग्ने मौका जुरयो । हरेक गायक गायिकाको एउटै सपना हुन्छ पाश्र्व गायक गायिका बन्ने । त्यस्तै सपना किरण प्रधानसँग पनि थियो । उनको पाश्र्व गायक बन्ने सपना पुरा हुनुकोसाथै अर्काे उचाईमा पुरयाईदियो ।
भूल हो तेरो गीतपछि किरणले क्रमशः भन्ज्याङ्खको डीलमा बसी,पत्थरको मुटु बोकेर जस्ता एकपछि अर्काे कालजयी गीत गाउने अवसर पाए । तर उनको एउटा सपना भने अझै अधुरै थियो । त्यो सपना थियो चलचित्रको पाश्वर्य गायक बन्ने । कर्म गर्दै जानुपर्छ,फल आफैं फल्छ भने जस्तै निरन्तरको सांगीतिक कर्मपछि एकदिन किरण प्रधानको पाश्र्व गायक बन्ने सपना पनि पूरा भयो चलचित्र अर्को जन्मबाट । उक्त चलचित्रका लागि उनले टोलाउँदै हेर्छ विधाता बोलको गीत गाएका थिए । त्यसपछि उनले अरु थप चलचित्रहरुकालागि समेत पाश्र्व गायनको अवसर पाउँदै गए । त्यसबीचमा उनले चलचित्र मायाप्रीतिका लागि शीर्ष गीतसँगै अरु गीतहरु पनि गाए । गोपाल योञ्जनको संगीतमा रहेका ती गीतहरु खूबै मन पराइए । त्यसपछि चलचित्र सम्झनाकालागि पनि उनले एउटा गीत गाए । त्यो गीत थियो के सोचे मैले के भयो अहिले Þ । यो गीतको नारी संस्करणमा चर्चित भारतीय गायिका आशा भोसलेको स्वर थियो । तर किरणले गाएको यो गीत पनि आÞशा भोस्लेको जत्तिकै चर्चित भयो । जसलाई उनी आफ्नो करियरकै ठूलो सफलता ठान्दछन् ।
यसरी पाश्र्व गायनमा समेत जम्दै गएका उनले थुपै्र चलचित्रकालागि उत्कृष्ट गीत गाए । त्यसबीचमा उनको चलचित्रकर्मीहरुसँग बढी हिमचिम हुन थाल्यो । त्यसले चलचित्रमा उनको रस पस्दै गयो । फलस्वरुप उनले आफ्नै निर्देशनमा प्रयास नाम भिडियो चलचित्र बनाए । उनले निर्माण गरेको प्रयास नेपालको पहिलो भिडियो चलचित्र थियो । त्यसपछि भिडियो चलचित्रको लहर यस्तरी आयो कि त्यसले सेल्युलाइड चलचित्रलाई समेत छायाँमा पर्ने अवस्था थियो । यो पचासको दशकको शुरुवाती वर्षहरुसम्मै कायमै थियो । प्रयासपछि किरण ठूलो पर्दाकै चलचित्र निर्देशन गर्न कस्सिए । र, उनले आफ्नै निर्माण र निर्देशनमा कस्तुरी नामक चलचित्र बनाए । जुन युरोपको लण्डनमा छायांकन गरिएको पहिलो नेपाली चलचित्र थियो ।
गायनमा मज्जाले जमेका किरण चलचित्रमा भने उत्ति जम्न सकेनन् । त्यसैले उनले दोहोर्याएर चलचित्र बनाउने प्रयास गरेनन् । तर आफूलाई वहुआयामिक प्रतिभाका रुपमा चिनाउन भने उनी सफल भए ।
किरणलाई छेकिदिने ४७ को त्यो कालो दिन
गायनक्षेत्रमा जसरी किरण प्रधानका रुपमा उनी दर्शक श्रोताको रोजाइका गायक थिए अहिले स्कुलमा पनि विद्यार्थी र सहकर्मी शिक्षकहरुका आदरणीय किरण सरका रुपमा परिचित छन् । यसैमा उनी सन्तोक मान्दछन् । अर्को कुरा उनलाई बच्चाहरुसँग बसेर रमाईलो गर्न खुबै मनपर्छ । त्यसैले त शिक्षण क्षेत्रमा तीन दशक कसरी र कतिखेर वित्यो,सम्झदा उनी आफैं दंग पर्छन् ।
गायनक्षेत्रमा राम्रो ख्याती प्राप्त गर्दै चलचित्रमा समेत परिचय बनाई सकेका किरण प्रधानको जीवनमा चलचित्रको कथा जस्तै लाग्ने अनेक क्षणहरु आए । त्यसैमा पर्छ उनको विवाहको प्रसँग । शुरुमा सुन्दा सबैलाई कुनै रोमान्टिक चलचित्रको काल्पनिक प्लट जस्तै लाग्छ । रोल
गायनक्षेत्रमा लागेर किरण प्रधानले नाम,दाम र काम त पाए,जीवनसंगीनी समेत उनले गायन यात्रामा हिड्ने क्रममै भेटे । एकदिन किरण आफ्नो साथीसँग कतै जाँदै थिए । बाटोमा जादै गर्दा उनको नजर बाटोमा हिडिरहेकी एउटी सुन्दर युवतीमा गएर अडिए । उनी सँगै गएका साथीले झक्झकाएपछि बल्ल झसङ्ख भए उनी । संयोगले ती युवती उनकै साथीका चिनजानका परेछन् । पछि तिनै साथी मार्फत किरण ती युवतीसँग नजिकिदै गए । उनलाई धेरैपछि मात्र थाहा भयो ती युवतीको नाम दिव्यलक्ष्मी श्रेष्ठ रहेछ ।
उता दिव्यलक्ष्मीलाई भने पहिलो भेटले खासै असर परेन । किनभने त्यतिखेर उनको मनमा किरणप्रति त्यस्तो कुनै फिलिङ्स थिएन । पछि साथी साथी मार्फत दोश्रो भेटघाट भएपछि बल्ल उनले किरण प्रधान गायक भन्ने थाहा पाए । त्यसपछि किरणप्रति अलि आकर्षित भएकी उनी थाहै नपाई प्रीति बसेको बताउछिन् ।
किरण अनि दिब्यलक्ष्मीबिच बिस्तारै भेटघाट बढ्न थाल्यो । त्यतिखेर उनी किरणलाई दाइ भनेर सम्बोधन गर्थिन् । हरेक भेटघाटमा दिव्यलक्ष्मीले दाइ एउटा गीत सुनाउनुस् न भन्थिन् । उनको फर्माइसमा किरण घन्टौंसम्म गाउँथें, सुनेर बस्थिन् दिव्यलक्ष्मी ।
त्यसरी फिल्मी शैलीमा विवाह गरेका यी जोडीले विवाहको ४२ औ वसन्त पार गरिसकेका छन् । अहिले प्रधान दम्पतिका ३ सन्तान् छन् २ छोरी र एक छोरा । दुवै छोरी डाक्टर छन् । जेठी छोरी डा जोत्सना प्रधान र कान्छी छोरी डा ज्यास्मिन प्रधान । उनीहरु हाल अष्टेलियामा छन् । छोरा कुलदीप प्रधान भने युकेको एक युनिभसिर्टीमा पढाउछन् । तीनै जना छोराछोरीको घरजम हुनुको साथै अहिले किरण हजुरबुबा समेत भैसकेकाछन् ।
किरण प्रधान जति प्रतिभावान थिए,त्यसलाई उनको जागीरे जीवनले थिचिराखेकोमा उनका शुभचिन्तकहरुको सदैव गुनासो रहँदै आएको छ । जति नै व्यस्त भए पनि,जति नै जिम्मेवारी आइपरे पनि आफूभित्रको गायन प्रतिभालाई मर्न दिन नहुने उनीहरुको किरणलाई सुझाव छ । समय निकै घर्कीसकेको छ तर ढिला नै भैसकेको भने होइन । त्यसैले अब समय मिलाएर फेरि गीत संगीतमा सक्रिय बन्न शुभ चिन्तक र साथीहरुले किरणलाई दबाब दिइरहेका छन् । बहुमुखी प्रतिभाका धनी किरण प्रधान गायन, अभिनय,चलचित्र निर्देशनसँगै हस्तकलामा समेत उत्तिकै पोख्त छन् । यति धेरै प्रतिभाका धनी प्रधान विगत ३ दशकदेखि स्कूलको व्यवस्थापनमै व्यस्त रहे । यसले उनीभित्रको प्रतिभा खुम्चिन थालेकोमा उनका शुभ चिन्तकहरुको गुनासो छ । त्यसैले उनका शुभ चिन्तक,आफन्त र साथीभाइ उनलाई पुनः गायन क्षेत्रकालागि पनि केही समय छुट्याउन सुझाव दिन्छन् ।
प्रधानकै निर्देशनमा बनेको चलचित्र कस्तुरीमा पहिलोपटक क्यामरा सम्हालेका बरिष्ठ छायाँकार गौरीशंकर धँजु किरणका बाल्यकालदेखिका साथी समेत हुन् । गौरीशंकर किरणका बुबाका बिद्यार्थी थिए । त्यसैले गौरीशंकर किरणसंगै उनका परिवारसंग समेत नजिकछन् । आफूलाई चलचित्र क्षेत्रमा डोर्याउन ८० प्रतिशत हात किरणकै रहेको गौरीशंकर बताउछन् ।
Previousअष्ट्रेलियाको एउटा तस्बिर विश्वभर फैलियो, कारण यस्तो
Nextतपाईंको मत बदर हुने त होइन ? जान्नुहोस् मतदान गर्ने सही तरिका
BIG NEWS : ३० हजार पीआर कटौती गर्ने अष्ट्रेलियन सरकारको घोषणा
७ चैत्र २०७५, बिहीबार ०२:०३